Russian State University nokuda Humanities - Kudzidza mhiri
Russian State University nokuda Humanities
Musakanganwa kuti discuss Russian State University for the Humanities
ussian State University nokuda Humanities akakura kubva Moscow State Institute for History uye Archives. rokuberekwa pamutemo Its ndiko 27 Kurume 1991.
Rwakapoteredza rokutanga admissions kupinda RSUH kwakaitika 1991. Pasinei aro vanganzi mudiki, RSUH yasvika kuva mumwe yakanakisisa pakati vanoremekedzwa zvikuru mumayunivhesiti munyika, wakati yakabuda sezvo ari kutungamirira redzidzo nokutsvakurudza nzvimbo muRussia. University wedu aiva wekutanga munyika kuti nokubatanidza mashoko "Russian" uye "nevanhu" muzita rayo. Tinodada uye inoremekedzwa kutakura zita ichi, nokusingaperi kuedza zvakare kusimbisa mamiriro edu. Kufambira mberi takaita zvinozivikanwa zvose mukati munyika uye kunze. Makore ose apfuura RSUH kwave mumwe sough-pashure vakawanda nemasangano pakati waunotarisira vadzidzi. Uye tinonzwa achisungirwa kwete kuchengetedza asiwo kutanga kuvandudza nhaka pamwe yatiri kupinda gumi rechitatu munhoroondo yedu.
University zvinotaurwa dzidzo:
The European mbiri-pamwero yedzidzo (B.A. - M.A.) zvinoonekwa kunowedzera nhamba Mhando kurovedza uye inopa Zvinogoneka kudzidza uye kushanda kunze.
Kusangana kutsvakurudza uye dzidzo ambotirega vadzidzi kutanga pakutsvakurudza unyanzvi uye kuwana anodiwa akagadzirwa competences.
Kuenderera uye interdisciplinarity hunomiririrwa vabatane rokudzidzisa kunzwisisa vachiramba akatevedzana unyanzvi zvirongwa chokuita non-.
Practice vaifarira kusvika kuti Makwara edzidzo kunobva pamusoro nokungwarira akasika mubatanidzwa yokungotaura ruzivo dzinokosha uye maoko-pamusoro unyanzvi.
The yedzidzo zvakatipoteredza kudzidza, uye inobva pfungwa rusununguko rokusika uye nyanzvi kuzvidzora actualization uye pamusoro pemisimboti yakawiriranwa shiviriro.
Student vaifarira yedzidzo Chinobvumira tapping kupinda nomumwe nemano vadzidzi. The University ane chinoshingaira muperekedzi hurongwa.
The upenyu-refu kudzidza pfungwa anoona dzidzo sezvo chinoramba uye uninterrupting muitiro. RSUH inopa mukugadzirira kudzidziswa vanotarisira vadzidzi, kupfuurira zvirongwa dzidzo uyewo akapedza kudzidza uye dhigirii Makwara. The zvirongwa anoshanda zvose muMoscow uye munzvimbo.
Nheyo "tichidzidzisa kuburikidza unyanzvi" kwakatungamirira asika yakasiyana kurovedzwa mamiriro - achidzidzisa mumamiziyamu uye kuratidza dzimba.
Division for History, Political Science uye Mutemo
Institute for Economics, Management uye Mutemo
“Russian Anthropology School” sangano
ChiRussian – Swedish Center for Education and Research
ChiRussian – Turkish Educational and Research Center
Moscow Public University, rakavakwa 1908 through the initiative of Alfons L. Shanyavsky, an eminent Russian patron of arts, played a special role in Russian education.
Kusvika pa 1918, it was Russia’s first “free” university center unfettered by formal limitations and open to everyone “truly thirsting for knowledge”. It implemented the progressive principles of alternative education in conjunction with a sound academic foundation available to all.
mu 2012, Russian State University for the Humanities celebrates the 100fung anniversary of its main building, izvobelonged to Moscow Public University before the Russian Revolution of 1917.
By the beginning of the 1990s this institution achieved the level of “university”, which naturally enabled it to become the structural heart of RSUH, iyo rakaumbwa 1991.
Unoda discuss Russian State University for the Humanities ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Photos: Russian State University nokuda Humanities pamutemo Facebook